Uummata Itiyoophiyaa Miliyoona 5.6tu Gargaarsa Yeroo Hatattamaa Eeggataa Jira: USAID – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Uummata Itiyoophiyaa Miliyoona 5.6tu Gargaarsa Yeroo Hatattamaa Eeggataa Jira: USAID
Uummata Itiyoopiyaa Miliyoona 5.6tu Gargaarsa Yeroo Hatattamaa Eeggataa Jira: USAID
WAASHINGITAN, DIISII — Itiyoophiyaatti daayrekteriin Jaarmayaa gargaarsa misoomaa Ameerikaa kan USAID Leslii Riid hongeen baranaa kutaalee Ardii Afriikaa hedduu miidhe jira jedhan.
Deebiin hongee kana ilaalchisee jirus kana yaada keessa galchuun ta’uu akka qabu daayrekteriin kun ibsaniiru.
Hongeen kunmiidhaa kan jiru Itiyoopiyaa qofaa miti. Ugaandaa miidhaa jira. Kutaa Keeniyaa gama kaabaa illee miidhaa jira. Sudaan Kibbaas akkasuma. Taanzaaniyaa keessaa rakkoo wabii nyaataatu jira. Maadagaaskaar reefuu hongee irraa dandammataa jirti jedhan.
Itiyoopiyaa naannoo horsiisee bulaa keessaa lammiiwwan miliyoona 5.6 gargaarsa yeroo hatattamaa eeggataa kan jiran ta’uu Leslii Riid beeksisaniiru.